July | 2012 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Posted on July 30, 2012 by chitnge
ရွာဟောင်းကြီးဘုရား၌တရားအားထုတ်ခြင်း ရွာဟောင်းကြီးဘုရား၌ တရားအားထုတ်သောအခါ ဘုရား၌ မီးပူဇော်ခြင်းများ မရှိတော့ချေ။ သို့သော် ရေတိုးသောရာသီ ဖြစ်သဖြင့် လေများ တဟူးဟူးတိုက်ကာ တရားအားထုတ်၍ ကောင်းပါသည်။ ပုဂံမြို့ပေါ်ရှိ ဘုရားများ၌ ဘုရားဖူးများသည် အသီးသီးလာကြသည်ဖြစ်ရာ ဘုရားပေါ်တက်၍ နေ၀င်နေထွက် ရှုခင်းများ ကြည့်၍ရနိုင်သော ဘုရားများသို့ ဘုရားဖူးများ အလာများကြသည်။ အပေါ်တက် မကြည့်နိုင်သော ဘုရားများ၌မူ အပေါ်တက်ကြည့်နိုင်သော ဘုရားများလောက် ဘုရားဖူးများ မရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဥပမာ-ရွာဟောင်းကြီး ဘုရားသည် အပေါ်တက်ကြည့်ခွင့် ရစဉ်က လွန်စွာစည်ကားခဲ့သည်။ ဘုရားစောင့်လည်း ရှိသည်၊ ဈေးဆိုင်များလည်း … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, ဆရာမြတ်ကြီး, အနိစ္စ, မြတ်စွာဘုရား	| Leaveacomment
Posted on July 26, 2012 by chitnge
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွန်စွာရိုးသားသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် “ကျွန်မမှာ ဒေါက်တာဘွဲ့ မရှိပါဘူး၊ ဂုဏ်ထူးဆောင် ပေးတယ်ဆိုတာဟာ ဒေါက်တာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို မသုံးသင့်ပါဘူး၊ သုံးပိုင်ခွင့်လည်း မရှိပါဘူး၊ ကျွန်မကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို့ပဲ ရိုးရိုးဆက်ပြီး ခေါ်သွားလို့ရပါတယ်။ ဒေါက်တာအခေါ်ခံစေချင်ရင် စာမေးပွဲ ဖြေရတော့မလို ဖြစ်နေပြီ” ဟု ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ရှင်းလင်း ဖော်ပြောချက်မှာ လွန်စွာရိုးသားကြောင်း သိသာထင်ရှားပါသည်။ အမှန်မှာမူ ဂုဏ်ထူးဆောင်ရရှိသော ဒေါက်တာဘွဲ့ကို ဒေါက်တာဘွဲ့ တပ်ခွင့်မရှိဘူး ဆိုသည်ကို No tags for this post.
Posted on July 18, 2012 by chitnge
ဂူပြောက်ကြီးဘုရား၌တရားအားထုတ်ခြင်း စာရေးသူတို့သည် ထိုနေ့ညက ဂူပြောက်ကြီးဘုရားသို့ ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ဂူပြောက်ကြီးဘုရားမှာ စာရေး သူတို့ရောက်သည့်အချိန်တွင် သော့ခတ်ထားပြီဖြစ်သည်။ ဘုရားအစောင့်ကို သွားရောက်၍ သော့ဖွင့်ပေးရန် ပြောဆိုလျှင် ရနိုင်သော်လည်း မပြောဆိုတော့ပါ။ စာရေးသူတို့သည် ဘုရားအပြင်ဖက်မှသာ တရားအားထုတ် ခဲ့ကြသည်။ မီးဆလိုက်များကတော့ အပြင်ဖက်မှာ ပူဇော်ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် လင်းလင်းချင်းချင်း ရှိပါသည်။ စာရေးသူတို့သည် အထဲသို့ မ၀င်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းတစ်ခုသာ ရှိသည်။ တရားထိုင်လို့ကောင်းပါသည်၊ ရုပ်နာမ်နှစ်ပါး ခန္ဓာငါးပါး ဘုရားလှူ၍ Tags: Buddhism, Myanmar Posts, အနိစ္စ
Posted on July 17, 2012 by chitnge
အပြင်ကိုမလိုက်ဘဲအတွင်းကိုလေ့လာခြင်း စာရေးသူသည် သိပ္ပံပညာရှင်များအား မိမိအဇ္ဈတ္တစိတ်ကို လေ့လာရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များ သည် လေ့လာစူးစမ်းရာ၌ လွန်စွာတော်သည်။ ပြင်ပကမ္ဘာ စကြ၀ဠာအကြောင်းကို လေ့လာရာ၌ အရမ်းတော်သည်။ လူ့သမိုင်းအတွက်လည်း အထောက်အပံ့ များစွာပြုသည်။ သို့သော် ယင်းတို့သည် ရာဂစိတ်၊ တဏှာစိတ်၊ လောဘစိတ်များကို လေ့လာရန်မူ သတိမရကြချေ။ အကယ်၍ သဘာဝတရားအကြောင်းကို လေ့လာချင်ပါသည် ဆိုလျှင် မိမိတို့ရုပ်နာမ်၏ သဘာဝကိုပါ လေ့လာသင့်ကြောင်း ထပ်လောင်း၍ အကြံပြုလိုသည်။ ရာဂစိတ်ပေါ်လာလျှင် မည်ကဲ့သို့သော အကြောင်းကြောင့် ပေါ်ရသနည်း? Tags: Buddhism, Buddhism … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Buddhism and Science, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, သိပ္ပံ, အိုင်းစတိုင်း, လောကုတ္တရာ	|2Comments
Posted on July 16, 2012 by chitnge
မျက်တော်ပြေဘုရား၌တရားအားထုတ်ခြင်း စာရေးသူတို့သည် ကျန်စစ်မင်းကြီး တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သော မျက်တော်ပြေဘုရားတွင် တရားအားထုတ် ကြသည်။ လက်တွေ့လာသောအခါ မျက်တော်ပြေဘုရားနှင့် အတွင်းစည်းခုံဘုရားတို့သည် တစ်ဝိုင်းထဲကဲ့သို့ တည်ဆောက်ထားသည်။ အတွင်းစည်းခုံမှာ ကွမ်းဆော်ကြောင်းဖြူ မင်းတရားကြီးနှင့် ကျန်စစ်မင်းကြီး ပူးတွဲ၍ တည်ထားကိုးကွယ် သောသဘော မှတ်တမ်းသိရသည်။ စောစောပိုင်းကမူ စာရေးသူသည် ကွမ်းဆော်ကြောင်းဖြူ မင်းတရားကြီး နှင့် ကျန်စစ်မင်းကြီးတို့၏ ဆက်ဆံရေးကို ဤ၍ဤမျှ ရင်းနှီးသည်ဟု မသိခဲ့ဖူးပါ။ ကွမ်းဆော်ကြောင်းဖြူမင်း တရားကြီးသည် အနော်ရထာမင်းကြီး၏ ဖခမည်းတော် ဖြစ်ကြောင်းကိုသာ သိခဲ့သည်။ ယခုအခါ ကွမ်းဆော်ကြောင်းဖြူ မင်းတရားကြီးသည် … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ဆရာမြတ်ကြီး, မြတ်စွာဘုရား	| 1 Comment
ပုပ္ပါးတောင်ကလပ်၌တရားအားထုတ်ခြင်း ယခုတလော စာရေးသူသည် ခရီးသွားနေသည်ဟု ဆိုရမည်။ ပုပ္ပါးကိုရောက်သောအခါ ဦးပြည့်စုံကို သတိရသည်။ ဦးပြည့်စုံကို ခင်ပါသည်။ တရားသဘောများလည်း ဆွေးနွေးကူညီဖူးသည်။ ပုပ္ပါးသည် တစ်ချိန်က လောကီဒေသဟု သတ်မှတ်ကြခြင်းကို ခံရသည်။ သို့သော် အမှန်မှာမူ လောကုတ္တရာ အားထုတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ ပုပ္ပါးတောင်၌ ၀ိပဿနာတရား အားထုတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ သူတော်ကောင်းများ တရားအားထုတ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ မိမိသည် ပုပ္ပါးဦးပြည့်စုံ၏ ဗိမ္မာန်၌ထိုင်ကာ တရားအားထုတ်သည်။ မြတ်စွာဘုရား ဦးထိပ်ထား၍ ခန္ဓာငါးပါး ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးလှူသည်၊ ဆရာမြတ်ကြီးကို ဦးထိပ်ထားသည်။ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ဆရာမြတ်ကြီး, ဟဒယ, အနိစ္စ, မြတ်စွာဘုရား	| 1 Comment
Posted on July 13, 2012 by chitnge
ခရီးသွားရင်းတရားထိုင်ဖြစ်ခြင်း ဒီရက်ပိုင်း မန္တလေးသို့ ခရီးသွားဖြစ်သည်။ ဆရာမြတ်ကြီး သီတင်းသုံးခဲ့ဖူးရာ သန္တိသုခ၌ တရားထိုင်ပါသည်။ ဆရာမြတ်ကြီး၏ ကျေးဇူးတော်အား ဦးထိပ်ထားသည်။ မြတ်စွာဘုရားကို ခန္ဓာငါးပါး ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးလှု၍ ဆရာမြတ်ကြီးအား ဦးထိပ်ထားကာ တရားထိုင်သည်။ တရားအာရုံများကောင်းပါသည်။ ကြည်လင်သည်၊ လွတ်မြောက်သည်၊ ဟာလပ်သည်၊ တည်ငြိမ်သည်၊ ငြိမ်းအေးချမ်းသာသည်၊ တရား၏အရသာကို ခံစားရသည်။ တရားတော်၏ဂုဏ်ကျေးဇူးကား လွန်စွာကြီးမားလေသည်။ ရတနာမြတ်သုံးပါး၏ ဂုဏ်ကျေးဇူး သည် အကြီးဆုံးပင်ဖြစ်သည်။ တရားထိုင်၍ကောင်းသဖြင့် အများသူငါလည်း တရားထိုင်၍ ကောင်းကြပါစေ ဟု ဆုတောင်းမိသည်။ အမျှအတန်းပေး၍ မေတ္တာများပို့သည်။ ထိုမှ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ဆရာမြတ်ကြီး, မြတ်စွာဘုရား	| Comments Off on ခရီးသွားရင်းတရားထိုင်ဖြစ်ခြင်း
Posted on July 4, 2012 by chitnge
ဒဿနပညာကို ချစ်မြတ်နိုးမိခြင်း လူတို့သည် ကိုယ်သန်ရာ ကိုယ်သန်ရာကို ချစ်မြတ်နိုးတတ်ကြသည်။ ထိုသို့ ချစ်မြတ်နိုးပြီးနောက် ကိုယ်သန်ရာမှ ဤလောကကို အလှဆင်သည် ဆိုသကဲ့သို့၊ ကိုယ်တတ်တဲ့ ပညာဖြင့် လောကအလှကို ဆင်ကြသည်။ မိမိအနေနှင့်မူ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒဿနပညာကို ချစ်မြတ်နိုးမိသည်။ ဒဿနပညာရပ်မှာ မူလ Philosophy – (Philosophia) အဓိပ္ပာယ်မှာ – ပညာရှိခြင်းကို ချစ်နှစ်သက်ခြင်း ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ထိုအခါ ပညာရှိခြင်းကို ချစ်နှစ်သက်ဖို့ အတွက်တော့မူ လူတော်တော်များများက ထောက်ခံကြမည်သာ ဖြစ်သည်။ မိုက်ကန်းကန်းလုပ်ခြင်း၊ မိုက်ရှုးရဲလုပ်ခြင်း … Continue reading →